Muxuu Mohamed Salah ka yiri goolkii uu xalay dhaliyey oo uu ku galay Taariikhda kooxda Liverpool?? – Gool FM
Muxuu Mohamed Salah ka yiri goolkii uu xalay dhaliyey oo uu ku galay Taariikhda kooxda Liverpool??
Haaruun April 6, 2019
(Liverpool) 06 Abriil 2019. Mohamed Salah ayaa farxad ka muujiyey sheegayna inuu mar walba ka fikirayo sidii uu gool u dhalin lahaa kaddib markii uu xalay soo gabagabeeyey siddeed kulan oo uu gool la’aan ahaa.
Salah ayaa xalay taariikh u dhigay kooxda Liverpool kulankii ay 3-1 uga adkaadeen Southampton ee Premier League kaddib markii xiddiga reer Masar uu noqday laacibka ugu dhaqsiyaha badan ee Reds u dhaliya 50-gool oo horyaalka ah, wuxuuna u baahday oo qura 69-kulan si uu u dhaliyo 50-gool.
Xalay ka hor Salah ayaan shabaqa soo taaban tan iyo 9 bishii Febraayo, waana gool la’aantiisii ugu dheerayd tan iyo markii uu kooxda Reds kaga soo biiray Roma sanadkii 2017-kii, markaasoo ay ku soo qaateen 34 milyan oo gini.
Salah oo ka hadlayey goolkii uu xalay dhaliyey oo uu taariikhda Liverpool ku galay ayaa Sky Sports u sheegay: “Waxaan u malaynayaa inaad weeraryahan ahaan u baahan tahay inaad gool dhaliso, waxaan ka fikirayaa inaan gool dhaliyo.”
“Anigu aad baan ugu faraxsanahay inaan gool dhaliyo si uu u caawiyo kooxda, taasi waa midda ugu muhiimsan ee aan doonayno.”
Macallinka Tottenham ee Mauricio Pochettino oo bartilmaameed u ah mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee Talyaaniga
Weeraryahan ka tirsan kooxda Barcelona oo seegaya kulanka Champions League ee Manchester United